Vaovao - Miaraka amin'ny toe-draharaha misy ankehitriny, tokony hataontsika tsikelikely sy mavitrika izany
Tamin'ny 16 aprily, nahazo akanjo 3000 i Pinyang, izay natolotra soa aman-tsara ny faha-29. “Ny habetsahan'ity baiko ity dia tena kely ary mila loko fito. Maharitra 12 ora ny lokon'ny loko iray ary telo andro ny loko fito. Ilaina koa ny mameno ireo dingana isan-karazany toy ny fanenomana sy fanontana. Farany, afaka hatolotra ao anatin'ny 13 andro izy, izay taratry ny fahalalahana sy ny hakingana amin'ny famokarana orinasa.
“Raha tsy misy ny fanovana orinasa sy ny fisainana Internet dia tsy ho vita ireo zavatra ireo. Ny fieritreretana amin'ny Internet dia mila fiaraha-miasa mba hampiharana ny foto-kevitry ny fandefasana 7 andro isaky ny dingana. Ny tadivavarana kely mihidy dia mamorona tadivavarana mihidy lehibe, izay tafiditra ao anaty famokarana malefaka. Ny famokarana malefaka, toy ny lafarinina, dia azo vonoina na lehibe toy inona aza ny filaharana.
Ny fahaleovan-tena dia tsy hita taratra fotsiny amin'ny foto-kevitry ny fanovana ny dingan'ny famokarana, fa koa amin'ny foto-kevitra momba ny fitantanana orinasa. Ny 70% amin'ny asa amin'ny orinasan-damba dia tokony ho sanganasa kely, ary ny mpiasa dia tokony ho vonona hanao baiko lehibe. Noho izany, ny fanamboarana miovaova dia manana fitakiana avo lenta amin'ny fitantanana ary tokony ho voaomana tsikelikely ao anatin'ny fotoana fohy. Ny famokarana akanjo dia indostria miasa mafy hatrany. Ohatra, ny fitaovana famahanana mandeha ho azy ao amin'ny atrikasa fandokoana dia manatsara ny fizotran'ny dingana sy ny kalitaon'ny vokatra. Na izany aza, amin'ny rohy famokarana sasany, tsy azo atao ny manafoana tanteraka ny asa. Tsy azo ihodivirana ary ilaina ny fampandrosoana ny indostrian'ny indostrialy mandraka ankehitriny. Na izany aza, noho ny indostria samihafa sy ny haavon'ny fidirana samihafa dia ilaina ny manambatra ny toe-draharaha misy ankehitriny mba hanao azy tsikelikely sy mavitrika.